ओली सरकार निरंकुश र लुटतन्त्रवादी- डा. गोविन्द केसी – Online National Network
ओली सरकार निरंकुश र लुटतन्त्रवादी- डा. गोविन्द केसी
११ बैशाख २०७५, मंगलवार ०४:५९
वैशाख, ११ काठमाडौं – डा. गोविन्द केसीले अहिलेको सरकार निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी भएको बताएका छन् । माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्न नदिने सरकारी निर्णयलाई डा. केसीले निरंकुशताको पहिलो अभ्यास भन्दै आफूले यो निशेधाज्ञा तोडेरै छाड्ने बताए ।
लोकतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा अनलाइनसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै डा. केसीले भने– ‘अहिले दुईतिहाइवाला सरकार छ । सबै पार्टीहरु आफूलाई प्रजातन्त्रवादी लोकतन्त्रवादी भन्छन् । यिनीहरु आफूलाई समाजवादी भन्छन्, साम्यवादी भन्छन् । तर, यिनीहरु न समाजवादी हुन्, न साम्यवादी हुन् । यिनीहरु लुटतन्त्रवादी हुन् । यिनीहरुलाई लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता पनि थाहा छैन, मर्म पनि थाहा छैन ।’